Kooxda Absheron Hotel waxay u magacaawday Scott Mawhinney Maareeyaha Kooxda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Ganacsiga » Kooxda Absheron Hotel waxay u magacaawday Scott Mawhinney Maareeyaha Kooxda
Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Dadka • War-Saxaafadeed • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Absheron Hotel Group ayaa u magacaabay Scott Mawhinney inuu noqdo Maareeyaha Guud ee Guud ee Kooxda. Iyada oo ku saleysan Baku, Azerbaijan, Mawhinney wuxuu kormeeri doonaa howlaha magaalada ugu cusub uguna macquulsan magaalada; hudheelka Bilgah Beach, iyo Pik Palace iyo hudheelada Park Chalet, oo labaduba ku yaal magaalada loo dalxiis tago ee Shahdag, oo 200 kiiloomitir woqooyi ka xigta Baku. Labada hoteel ee Pik iyo Park Chalet labaduba waxay ka mid yihiin Marriott's Autograph Collection, oo loogu talagalay khibradaha hudheel ee ugu quruxda badan adduunka.
Scott Mawhinney oo ku dhashay Kanada wuxuu keenaa khibrad heer sare ah oo heer caalami ah doorka 25 sano oo waayo-aragnimo huteel caalami ah, isagoo ka soo shaqeeyay Aasiya, Yurub, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Baasifiga iyo Bariga Dhexe. Dhawaanahan, wuxuu ahaa Maareeyaha Guud hudheellada abaalmarinta badan ku guuleystay ee Kingsbury ee ku yaal Colombo, Sri Lanka. Intaas ka hor, wuxuu qabtay dhowr jago oo sare oo maamul furid ah, oo ay ku jiraan 7-xiddig Burj Al Arab hotel oo ku yaal Dubai, iyo Pangu 7-star Hotel oo ku yaal Beijing. Sidoo kale wuxuu siddeed sano ku qaatay jagooyinka sare ee fulinta Shangri-La Hotel & Resorts. Mas'uul ka ah hawlgallada maalinlaha ah, waxqabadka maaliyadeed, iyo iibinta iyo suuqgeynta saddexda dhisme, Mawhinney wuxuu maamuli doonaa 600 oo shaqaale ah si loo hubiyo in heerarka waayo-aragnimada martida ee ugu tayada sarreysa la gaaro.
Jiri Kobos, oo ah Agaasimaha Maamulka ee Absheron Hotel Group ayaa tiri “Waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno qof ka mid ah rikoorka waxqabadka Scott ee ganacsigeenna. Waxaan kalsooni ku qabnaa inuu noqon doono hoggaamiye heer sare ah oo dhiirrigelin u noqon doona kuwa kale xagga maaraynta iyo kor u qaadista saddexdaas dhisme ee muuqda. ”
Kormeerida seddex ka mid ah huteellada Azerbaijan hormuud u tahay sharaf weyn ayey ii tahay inaan qaato oo waxaan rajeynayaa inaan wado mustaqbalka iyo horumarka dhismayaashaan gaarka ah, ”ayuu yiri Mawhinney. Aragtideyda ayaa ah inaan sii wado meeleeyo hudheelladan oo ka mid ah meelaha dalxiis ee ugu sarreeya Azerbaijan, iyadoo la tixgelinayo meesha xiisaha leh iyo sida ay ugu dhow yihiin in badan oo ka mid ah meelaha ugu dalxiiska badan sannadka.
Mawhinney wuxuu maamule sare oo MBA ah ka haystaa Jaamacadda Ottawa wuxuuna ka qalin jabiyay Maaraynta Hoteelka iyo Maamulka Hoteelka The Lausanne Hotel. Waxa kale oo uu haystaa shahaadada Bachelor of Arts ee Xiriirka Caalamiga iyo Siyaasadda ee Jaamacadda Western Ontario, iyo shahaadooyinka Dugsiga ee Cornell Hotel ee Maamulka Maaliyadda iyo Maareynta Waxsoosaarka. Wuxuu si fiican ugu hadlaa Ingiriisiga, Faransiiska iyo Isbaanishka.